Others Archives - Page2of 10 - Shop Life: A Blog To Complete Your Lifestyle
Shop Life: A Blog To Complete Your Lifestyle > All Articles > Others
Stay Home ကာလမှာအိမ်ရှင်မတွေအတွက် အထောက်ကူဖြစ်စေမည့် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ0174
Usman Ghani October 9, 2020 10:02 am November 4, 2020
အိမ်တွင်းမှာ ရှိတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေကို အထိအခိုက်မရှိ သန့်စင်နိုင်ဖို့အတွက် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်အချို့ကိုသိထားဖို့လိုမယ်နော်. လက်ပ်တော့များကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း လက်ပ်တော့တွေကို များသောအားဖြင့် ဖုန်စုပ်စက်အသေးစားတွေ၊ သွားပွတ်တံတွေနဲ့ပဲသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ကြပါတယ်။ တကယ်က လက်ပ်တော့တွေမှာ ကပ်နေတဲ့ဖုန်တွေနဲ့ ပိုးမွှားတွေကို သန့်ရှင်းဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်း …
သားသားမီးမီးတို့အကြိုက် အရသာရှိပြီး အားဖြစ်စေမည့် Snack များ0176
Usman Ghani October 7, 2020 10:20 am October 7, 2020
မိဘတွေအတွက် သားသားမီးမီးလေးတွေဆိုတာ ရတနာတစ်ပါးပါပဲ။ ဒီတော့ သားသားမီးမီးလေးတွေအတွက် အာဟာ ဖြစ်စေမည့် ဘယ်လို အစားအစာတွေဝယ်ကျွေးရမလဲဆိုတာ အမြဲတမ်းတွေးနေတတ်တာအမှန်ပါပဲ။ ကဲအဲ့တာဆိုရင် ခလေးတွေအတွက် အဆာပြေစားဖို့သင့်တော်တဲ့ အဆာပြေမုန့်တွေကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်… Mug Baby Noodles ဒီ Mug …
Community, Lifestyle, Others, Shop Event
Shop ရဲ့ (၆)နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် Shop Anniversary မှာ ဘယ်လို အစီအစဉ်တွေပါဝင်လာမှာလဲ?0194
Usman Ghani October 5, 2020 11:44 am October 12, 2020
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ e-commerce (အွန်လိုင်းအခြေပြု ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း)ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ Shop.com.mm ဟာ မယုံနိုင်လောက်တဲ့လျှော့စျေးတွေ၊ သီးသန့်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပနေကြဖြစ်တဲ့ 9.9 Super Saleမှာ ရောင်းချပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ 9.9 Super Sale ကြီးမှာ တစ်ခဲနက်ဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြတဲ့ ဝယ်ယူသူတွေအတွက်ရော 9.9 …
Beauty, Beauty, Others
အိမ်မှာနေရင်းကိုယ်တိုင်ဆံပင်ညှပ်ဖို့အတွက် အသုံးဝင်မည့်ပစ္စည်းများနဲ့နည်းလမ်းကောင်းများ0216
Usman Ghani September 30, 2020 10:12 am October 5, 2020
အိမ်မှာနေရင်း ဆံပင်မညှပ်တာကြာလို့ ဆံပင်အရှည်ကြီးတွေနဲ့ခေါင်းရှုပ်နေရပြီလား။ ဒီလိုအိမ်တွင်းအောင်းကာလမှာ အိမ်မှာနေရင်းဆံပင်ညှပ်ဖို့အတွက် ဆံပင်ညှပ်ပစ္စည်းလေးတွေလိုလာပါပြီ။ ဒီလိုဆံပင်ပစ္စည်းတွေရှိရုံနဲ့တော့ ညှပ်လို့မရသေးပါဖူး။ ဘယ်လိုအလွယ်တကူညှပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ အနည်းဆုံးသိထားဖို့လိုပါမယ်။ ကဲအဲ့တာဆိုရင် လိုအပ်တဲ့ ဆံပင်ညှပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ Xiaomi Enchen Electric Hair Trimmer ဒါလေးကတော့များသောအားဖြင့် …
အိမ်မှာနေရင်း ကိုယ်တိုင် ကိတ်မုန့်လုပ်စားချင်တဲ့သူတွေအတွက် ကိတ်မုန့်ဖုတ်ခြင်းနည်းလမ်းများ0463
Usman Ghani September 28, 2020 5:09 am October 5, 2020
သင်ရဲ့မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ဖုတ်တဲ့ ကိတ်မုန့်ဟာ ဘယ်ကိတ်မုန့်တွေနဲ့မှ မယှဉ်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ကိတ်မုန့်ဖုတ်ခြင်းသည်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုတိုင်းတာခြင်း၊ ၎င်းတို့ကိုမှန်ကန်သောအစဉ်အတိုင်းရောစပ်ခြင်းနှင့်ကိတ်မုန့်ကိုမီးဖိုထဲမှာ အသင့်တင့်ဖုတ်ခြင်းစတဲ့ အစီအစဉ်လိုက်မှန်ကန်အောင်လုပ်ဆောင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ vanilla ကိတ်မုန့် နဲ့ ချောကလက်ကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Vanilla Cake Vanilla Cakeပြုလုပ်တဲ့အခါ အသုံးပြုရမည့်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ ထောပတ် 225g၊ …
Shop ရဲ့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပနေကျဖြစ်ပြီး ၆နှစ်ပြည့်လဲဖြစ်တဲ့ Shop Anniversary အထူးစျေးရောင်းပွဲတော်0142
Usman Ghani September 23, 2020 11:50 am October 12, 2020
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းကိုဦးဆောင်နေတဲ့ Shop.com.mm ဟာ lမယုံနိုင်လောက်တဲ့လျှော့စျေးတွေနဲ့ သီးသန့်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပနေကြဖြစ်တဲ့ 9.9 Super Saleမှာ ရောင်းချပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ 9.9 Super Sale ကြီးမှာ တစ်ခဲနက်ဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြတဲ့ ဝယ်ယူသူတွေအတွက်ရော 9.9 Super Sale …
Gaming Console တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သင်ဘယ်လောက်များများသိလဲ?01453
Usman Ghani September 16, 2020 10:11 am September 16, 2020
Shop.com.mm မှာ Gaming Controller တွေကိုဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီ။ ဝယ်ယူရန် 📲 သင့်ဖုန်းထဲမှာ Shop App ရှိရုံနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အလွယ်တကူဈေးဝယ်နိုင်လို့ ခုပဲ Download လုပ်လိုက်ရအောင် …. To Download Shop MM app …
သင်ဟာ ငါးတွေအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတစ်ယောက်လား?01490
Usman Ghani September 14, 2020 9:39 am September 14, 2020
Shop မှာ အမျိုးမျိုးသော ငါးစာတွေtအပြင် ငါးကန်အလှဆင်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီ… ဝယ်ယူရန် 📲 သင့်ဖုန်းထဲမှာ Shop App ရှိရုံနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အလွယ်တကူဈေးဝယ်နိုင်လို့ ခုပဲ Download လုပ်လိုက်ရအောင် …. To Download Shop MM app …
သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ0472
Usman Ghani September 11, 2020 10:15 am September 11, 2020
ကျွန်တော်တို့တစ်နေ့တာ ဖုန်းအသုံးပြုမှုများနေပေမယ့် ဖုန်းတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အတွက် မေ့နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖုန်းတွေကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ဖို့ အတွက် လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်တွေနဲ့ အသုံးဝင်မည့်ပစ္စည်းတွေကို လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့တာဆိုရင် ဖုန်းကိုဘယ်လိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ဆပ်ပြာရည် ဒီဟာလေးကတော့ဖုန်းကိုဆေးဖို့အတွက် မဟုတ်ပဲ ဖုန်းကာဗာတွေနဲ့ …
Game ဆော့ရင်းနဲ့ အဆာပြေစားသောက်ဖို့သင့်တော်တဲ့ Gamer တွေအကြိုက်တွေ့စေမည့် အစားအစာများ0281
Usman Ghani September 10, 2020 11:58 am September 10, 2020
ဂိမ်းဆော့တတ်တဲ့လူအများစုဟာ ဂိမ်းတွေဆော့နေရင်းနဲ့ ဗိုက်ခဏခဏဆာတတ်ပါတယ်။ နေ့ဘက်တွေဆိုသိပ်မသိသာဖူးဆိုပေမယ့် ညဘက်တွေဆိုရင် သိသာတတ်ပါတယ်။ ကြာကြာထိုင်တာများရင် ဗိုက်ဆာတတ်တာလူတွေရဲ့ သဘာဝဖြစ်တဲ့အပြင် ဂိမ်းကစားနေရင်း အာရုံစူးစိုက်တာများတဲ့ အတွက် အစာချက်နှုန်းဟာလဲမြန်ဆန်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဂိမ်းကစားနေရင်း အသင့်စားသောက်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုမုန့်မျိုးတွေဝယ်ထားသင့်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်။ အဆာပြေမုန့်များ အဆာပြေမုန့်တွေကတော့ ဂိမ်းဆော့တဲ့သူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ ဂိမ်းကစားနေရင်း …
❄Air con ကို မီတာခ အရမ်းမကုန်အောင်ဘယ်လိုအသုံးပြုကြမလဲ?❄ 3229
သင့်ရဲ့ ဝါသနာကို အခုပဲရှာဖွေလိုက်ကြရအောင်…. 2992
သင်ဟာ မိတ်ကပ်တွေအကြောင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် ဒီမေးခွန်းတွေကိုဖြေကြည့်လိုက်ပါဦး? 1956
လက်ပတ်နာရီတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေကြည့်လိုက်ပါ!! 1761
ဂီတတူရိယာနဲ့ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေကြည့်ပြီးတော့ သင်ဟာဂီတဝါသနာရှင်ဟုတ်မဟုတ်စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်… 1738